के पद गणना का एसईओ मा गुणवत्ता गुणक हो? - Semalt पदोन्नति
गुगलका अनुसार, उत्तर होईन। लेखको शब्द गणना एक गुणात्मक कारक छैन। गुगलको जोन मुलर पुष्टि गर्दछ कि लेखमा शब्दहरूको संख्याले गुगलको खोज इञ्जिन बट्समा यसको गुणस्तर निर्धारण गर्दैन।
जोन मुलरलाई एक लेखमा शब्दहरूको संख्यालाई गुणस्तरको कारक मानिएको भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो र उनले जवाफ दिए कि यो महत्त्वको कुरा हो। यदि लेखमा अधिक शब्दहरू थप्दै, तपाई अधिक जानकारी थप्नुहुन्छ जुन प्रयोगकर्ताको प्रश्नसँग सान्दर्भिक छ, तब गुगलले तपाईको लेखलाई राम्रो दर्जा दिनेछ, तर त्यो शब्द गणनाको कुरा होइन बरु सान्दर्भिकता हो।
विचार यो थियो कि यदि एक पृष्ठ रैंकिंग छैन, तपाईं मद्दत गर्न अधिक सान्दर्भिक सामग्री थप्न सक्नुहुन्छ।
के अधिक प्रासंगिक सामग्री थप्न पृष्ठको रैंकिंगलाई मद्दत गर्दछ?
यो प्रश्न सोधेको व्यक्तिले अधिक प्रासंगिक सामग्री थपेर वेबपेजको श्रेणीलाई सुधार गर्ने प्रभावकारिताको सम्बन्धमा म्युलरको राय चाहेको थियो। यस प्रश्नमा, व्यक्ति "प्रासंगिक सामग्री" को अर्थमा स्पष्ट थिएन, जुन एकदम अस्पष्ट हुन सक्छ। के विषयवस्तु किवर्डसँग प्रासंगिक छ वा हुँदैन वा यदि सामग्री प्रयोगकर्ताको आशयसँग सम्बन्धित छ, वा यदि सामग्री पाठकहरूको लागि प्रासंगिक छ भने के हुन्छ।
त्यहाँ धेरै तरिका छन् जुन सामग्री प्रासंगिक हुन सक्छ। प्रश्न, जसले मुलरबाट प्रतिक्रिया जनाउँदछ, सोच्दै थियो कि यदि सामग्रीमा मात्र थप पाठ थप्यो भने यसले यसको स्तर सुधार गर्दछ।
सामग्री अपडेट गर्नु त्यति सरल छैन जस्तो देखिन्छ। यस प्रश्नको उत्तर दिँदा, जोन मुलर भन्ने कुरा सुरू गरेर शुरू हुन्छ कि सामग्री अपडेट गर्ने योसँग बढि सामग्री समावेश गर्नु भन्दा बढी छ।
के सामग्री गुण शब्द गणनासँग जोडिएको छ?
त्यहाँ व्यापक मान्यता छ कि गुणस्तर लेखहरू सामान्य रूपमा व्यापक हुन्छन्। किनभने गुण लेखहरू व्यापक छन्, ती लेखहरूले प्राय: बढि शब्दहरू प्रयोग गर्दछ। तसर्थ, तिनीहरू लामो छन्। तपाईंले सोधिरहनु भएको प्रश्न यो हो कि कसरी लेख दुबै व्यापक हुन सक्छ र अझै लामो छैन?
हामीले सेवा गरेको बर्षहरूमा हामी प्रायः यो प्रश्न सुन्दछौं। धेरै ग्राहकहरु विचार संग आउछन् कि गुणस्तर व्यापकता मा बराबर छ जो अधिकतर एक उच्च शब्द गणना प्रयोग गरी हासिल गरीन्छ।
गुगलको मुइलरले शब्दको गणनाको विचारमा टिप्पणी गरेर त्यस प्रश्नको जवाफ दिन जारी राख्यो, जबकि यो मात्र यसको गुणस्तर हो र परिमाण मात्र होइन। गुगलको दृष्टिकोणबाट, पृष्ठमा शब्दहरूको संख्या एक गुणात्मक कारक होइन, र यो क्रमबद्ध कारक पनि होइन। त्यसकारण अन्धाधुन्ध रूपमा साइटमा अधिक र अधिक पाठ थपेर, तपाईं यसलाई राम्रो बनाउँदै हुनुहुन्न।
स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्न, म्यलरले ब्रोशर विरूद्ध एउटा पुस्तकको उदाहरण प्रयोग गरेर सामग्रीको विचार र paint्ग पार्न को लागी प्रयास गर्दछ र प्रयोगकर्ताले के महसुस गर्छ उनीहरूको प्रश्न पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
म्यूएलर भन्छन् यो यस्तो हुन्छ जब तपाईले कुनै ग्राहकलाई मिडियामा हिड्दै हुनुहुन्छ। तपाईं कि त तिनीहरूलाई २०-पृष्ठ संक्षेप वा साधारण एक वा दुई-पृष्ठ ब्रोशर दिन सक्नुहुन्छ। जबकि केहि केसहरूमा ग्राहकलाई किताब चाहिन्छ, त्यहाँ अन्य केसहरू हुन्छन् जब तिनीहरू एक साधारण ब्रोशर छोटो र सीधा हुन्छन्।
यो तर्क खोजीमा लागु हुन्छ। यदि वेबपृष्ठमा जानकारी छ जुन यसलाई खोजी क्वेरीको लागि अनुक्रमणिकाको लागि आवश्यक छ र यो जानकारी छोटो पाठमा प्रस्तुत गर्न सक्छ जसले खोज इन्जिन बट्स र प्रयोगकर्ताहरूको लागि पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्दछ, त्यसपछि त्यहाँ अधिक पाठहरू थप्नु आवश्यक पर्दैन जसले क्वालिटी सुधार गर्दैन। त्यो वेबपृष्ठ। यो भन्नु सुरक्षित छ कि पृष्ठमा अन्धाधुन्ध पाठहरू थपेमा यो कुनै राम्रो हुँदैन।
पृष्ठमा पातलो सामग्रीहरू छन्
यो एक त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ धेरै शब्द गणनाको बिषयवस्तु सामग्री क्वालिटीको विषयमा अलमल्लमा पर्छन्। केही व्यक्तिहरू मान्दछन् कि पातलो सामग्रीहरू Google द्वारा कम ओरालो हुन्छ किनकि यो अत्यन्त छोटो छ। यो सत्यबाट टाढा हुन सक्दैन।
पातलो सामग्री छोटो सामग्री को लागी एक आम प्रतिष्ठा को विकास गरीएको छ। यो केस छैन। पातलो सामग्री उपयोगिता नभएको सामग्रीको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। पातलो सामग्री निर्धारित गर्ने तत्त्वहरू पृष्ठमा शब्दहरूको संख्या भन्दा पर जान्छ।
SEO को लागी सबै भन्दा राम्रो शब्द गणना के हो?
कम से कम, एसईओ को लागि शब्दहरूको पूर्ण मात्रा फेला पार्नु एक खिसकिएको खाल हुन सक्छ खानमा भरिएर। हो, हाम्रो मतलब यो हो कि शाब्दिक रूपमा। त्यहाँ धेरै चरहरू सामग्रीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त शब्दहरूको संख्यामा निर्णय गर्नु अघि तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ।
के त्यहाँ धेरै शब्दहरू छन् जुन तपाईंको सामग्रीमा हुनुपर्दछ यो पहिले स्थानमा श्रेणीकरण गर्न सक्दछ? के तपाईंको सामग्री धेरै लामो हुनु अघि शब्दहरूको अधिकतम लम्बाई छ? जब हामी ग्राहकहरूसँग उनीहरूको सामग्री सुधार गर्ने बारेमा कुरा गर्छौं, तब उनीहरूले हामीलाई सोध्ने पहिलो कुरा भनेको "हामीले लेख्नु पर्ने कति शब्दहरू" थिए।
वास्तविकतामा, लामो सामग्री छ, यो अधिक आधिकारिक हुन्छ। अधिक शब्दहरूको साथ, हामी प्रत्येक उत्तरको वर्णन गर्न सक्दछौं वा प्रत्येक उत्पादन/सेवालाई विस्तृत विवरणहरूमा वर्णन गर्न सक्छौं। त्यहाँ धेरै अध्ययनहरू भएका छन् जुन SEO विशेषज्ञहरूले या त समर्थन गर्न वा तर्कलाई प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछ कि शब्द गणना कुनै न कुनै रूपमा Google रैंकिंगमा जडित छ।
ब्याकलिंको द्वारा अप्रिल २०२० मा प्रकाशित एक अध्ययनले SERP शब्दहरूको औसत संख्या १4444। हो भनेर देखाउँदछ। एसईओ विज्ञहरू छिटो यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दछन् कि वेबपृष्ठ प्रति शब्दहरूको स number्ख्या संख्या १,500०० हुनेछ, यदि त्यो अध्ययनले भनेको छैन भने पनि। तर यसले हामीलाई एक वेब पृष्ठ प्रति शब्दहरूको सही रकम के हो भनेर एक विचार दिन्छ।
एक पृष्ठ को सामग्री को लागी एक शब्द गणना गर्नु अघि, त्यहाँ तपाईंले विचार गर्नु आवश्यक धेरै कारकहरू छन्। यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि पृष्ठमा रहेको सामग्री मानवीय आगन्तुकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुनुपर्दछ र र्याकिंग पोइन्टहरू स्कोर गर्नको लागि होइन।
त्यस पृष्ठमा रहेको सामग्रीको लम्बाइ खोजकर्ताको क्वेरीमा सबै आवश्यक उत्तरहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्न सक्दछ र उनीहरूको प्राथमिक उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो सजिलो प्रश्नको उत्तर सजिलैसँग पहिचान गर्न वा विशिष्ट शीर्षकहरूमा गहिराइ स्पष्टीकरणहरू पाउन, वा उत्पादन वा सेवाको बारेमा सिक्नको लागि हुन सक्छ।
त्यहाँ SEO को लागी सही शब्द गणना छ
हामी पाउँछौं; तपाइँ तपाइँको सामग्री SEO को लागी परिपूर्ण बनाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। समस्या यो छ कि शब्दहरूको पूर्ण संख्या अवस्थित छैन। वेब पृष्ठहरूले सामग्रीलाई धेरै कारकहरूमा आधारित रँक गर्दछ जुन सर्कलमा चारैमा कुन सामग्रीले राम्रो खोजीकर्ताको प्रश्न भेट्छ। सायद शब्दहरूको भोल्युम यस्तो हुन्छ जुन गुगल वा पाठकले विचार गर्नेछन् सामग्रीमा सबै आवश्यक जानकारी छ।
किन धेरै वेबसाइटहरू लामो सामग्रीको लागि जान प्रयास गर्छन् वास्तवमा सहसंबंध र कारणको एक मुद्दा हो। किन धेरै वेबसाइटहरूमा लामो सामग्री छ कि यसले सबै सामग्री मार्फत लिंक गर्न बढी अवसरहरू प्रदान गर्दछ, र लामो सामग्रीहरू अधिक सेयर गर्न योग्य र लिंक-योग्य सामग्रीको रूपमा हेरिन्छ।
हामी लामो बनाम छोटो सामग्रीमा समावेश जानकारीको मात्रा पनि विचार गर्न सक्दछौं। यदि ठीकसँग लेखिएको छ भने, लामो सामग्रीहरू निश्चित रूपले बढि जानकारी हुनेछ र खोजीकर्ताको खोजी क्वेरीलाई अझ विस्तृत उत्तर प्रदान गर्दछ; तसर्थ यो राम्रो रैंक हुनेछ।
यसैले जब लामो सामग्री "कम" छोटो सामग्रीको भन्दा राम्रो दर्जा दिन सक्दछ, यस सामग्रीको लम्बाइसँग सायद यसका साथ केही गर्न मिल्दैन। सामग्रीलाई दर्जा दिन, यो तथ्याually्क सही, विस्तृत, र स्पष्टसँग लेखिएको हुनुपर्दछ। तर विस्तृत लामो समयको लागि पर्यायवाची शब्द हो। यस अवस्थामा, यसको अर्थ सामग्री पूर्ण हुनुपर्दछ र सबै आवश्यक चीजहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
उत्तम श्रेणीकरणको लागि लेख सुधार गर्दै
लेखलाई अझ राम्रो बनाउने क्रममा सुधार गर्न केही जटिल हुन सक्छ। लेख सुधार गरेर, तपाईं लेखमा केवल अधिक शब्दहरू थप्नुहुन्न, जुन हाम्रा धेरै ग्राहकहरूले प्रयास गरेका छन्। यस प्रक्रियाको लागि केहि चरणहरू छन् जुन हामी तल प्रकाश पार्नेछौं।
पहिले तपाईले पृष्ठ के हो बारे मूल्या assess्कन गर्नु पर्छ। पृष्ठ अध्ययन गरिसकेपछि, के तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि यसले साइट आगन्तुकले चाहेको जानकारी सञ्चार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्दछ?
सुधार गर्दै सामग्रीहरू जसले उनीहरूको प्रासंगिकता गुमाए
कहिलेकाँही, लेख श्रेणीकरण रोक्न सक्दछ किनभने यो राम्रोसँग लेखिएको थिएन तर किनभने यो प्रयोगकर्ताहरूले केहि खोज क्वेरी खोजी गर्दा यसको अर्थ के हो भनेर होईन। समयको साथ, खोजीहरूको आशय परिवर्तन गर्न सक्दछ, जसको मतलब विषय र सामग्री अब उपभोक्ता खोजी क्वेरीसँग प्रासंगिक हुँदैनन्।
यसको एक राम्रो उदाहरण प्रयोगकर्ता हेर्नका लागि "चलचित्रहरू हेर्न" खोजिनेछन्। २०२० अघि यसको अर्थ राम्रो चलचित्रहरू हुन सक्दछन् जुन थिएटरमा देखाउँदै छन्। आज, गुगलले तपाईंलाई सामग्रीहरू दिन्छ कि चलचित्रहरू तपाईंको घरको आरामबाट हेर्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठमा शब्दहरूको कुनै सुरक्षित मात्रा छैन। हामीले लेख्ने र प्रकाशित गर्ने हरेक सामग्रीहरू जब सम्म यो प्रत्येक पृष्ठको सम्पूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक पर्दछ, र यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै आवश्यक जानकारी दिन्छ ताकि तिनीहरू पृष्ठमा उनीहरूको इच्छित कार्य पूरा गर्न सक्दछन्।
तपाईंको सामग्री लामो देखाउनको लागि एक सय अधिक शब्द नथप्नुहोस्। यदि यसले थप जानकारी थप्दै छैन र प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गरिरहेको छैन भने, यसले तपाईंलाई नकारात्मक असर पार्दछ।
तपाई जहिले पनि पुग्न सक्नुहुनेछ Semalt मद्दतको लागि यदि तपाईं कुनै एसईओ समस्यामा दौडनुभयो भने।